GADOODKII GARETH BALE: Tuuristii Vazquez, Gadoodkii Uu Sameeyey Iyo Wujuumkii Uu Ku Qaaday Luka Modric – – Cadalool.com
GADOODKII GARETH BALE: Tuuristii Vazquez, Gadoodkii Uu Sameeyey Iyo Wujuumkii Uu Ku Qaaday Luka Modric –
Real Madrid ayaa guul ay ku rafaadday waxay xalay ka gaadhay Levante oo ay marti u ahayd, waxaana laba gool oo rikoodheyaal ah u dhaliyey Karim Benzema iyo Gareth Bale.
Xiddiga reer Wales ee Bale ayaa daqiiqaddii 74aad soo galay ciyaarta, iyadoo la saaray Karim Benzema, waxaase nasiib wanaag u noqotay in daqiiqaddii 78aad loo daayey rikoodhe ay kooxdiisu heshay kaddib markii khalad lagu galay Casemiro, waxaana uu Bale ku hubsaday kubadda shabaqa.
Markii uu goolka dhaliyey, ayaa uu Benzema diiday inuu u dabbaal-dego goolkaas farxadda ku abuuray ciyaaryahannada kale ee kooxda, waxaana markiiba dhinaciisa u soo cararay Lucas Vazquez oo garabka qabsaday, hase yeeshee Bale oo cadhaysan ayaa iska furfuray isla markaana iska tuuray.
Sida ka muuqata sawirka sare ku xusan, Vazquez ayaa la yaabay ficilka Gareth Bale, waxaana sidoo kale uu waajahay Luka Modric isaga oo cadhaysan.
Ciyaartoyga kale ee kooxda ayaa sidoo kale uu Bale u muujiyey niyad-xumo, kuwaas oo u qaadan-waa ay ku noqotay.
Tababare Santiago Solari oo dhamaadkii ciyaarta warbaahinta la hadlay ayaa wax laga weydiiyey jewiga iyo dareenka Gareth Bale, waxaana uu ku gaabsaday in laacibkiisu uu xor u yahay qaabka uu u dabbaal-degayo, hase yeeshee, ficilka uu sameeyey ayaa sii muujinaya in aanu ku faraxsanayn kursiga kaydka ee uu tababaruhu ku ciilay.
Solari ayaa waxa uu Bale ka door-biday xiddigaha yaryar ee Vinicius Junior iyo Lucas Vazquez oo garbaha ka ciyaara.